Ibali le-Gian Carlo Menotti ye-NBC eyayiKhomishini eyodwa yoMthetho we-Opera
"Ama-Amahl nabavakalisi boBusuku" babhalwa nguGian Carlo Menotti kwaye baqala ngoDisemba 24, 1951. Le yileyonto yokuqala eyayiqulunqwa yithelevishini e-United States kwaye yaqala kwi-studio ye-NBC 8H eRockefeller Centre, kwisixeko saseNew York . Ukuhlala eBhetelehema kwinkulungwane yokuqala emva kokuzalwa kukaKristu, le opera yinto enye.
Ibali le-'Amahl nabavakalisi baBusuku '
U-Amahl, inkwenkwe eyaziwayo ngeendalana zakhe ezide kunye nobuxoki obuqhekezayo, uhamba ngeenxa yokukhubazeka ngenxa yokukhubazeka kwakhe.
Njengoko ehleli ngaphandle edlala ibhobho lomalusi wakhe, unina ucela ukuba angene ngaphakathi. U-Amahl uyanciphisa ukusabela kumyalelo kamama. Ekugqibeleni, emva kwemizamo emininzi yokumngenisa ngaphakathi, uya kungena endlwini. U-Amahl utshela umama wakhe ibali elihle leenkwenkwezi enkulu ephakamileyo phezulu esibhakabhakeni ngaphezu kwendlu yabo. Ewe, akakholelwa kuye kwaye umxelela ukuba ayeke ukumkhathaza.
Emva kokuba ilanga libekile, unina ka-Amahl uxhalabele ngaye kunye nekamva lakhe yonyana. Ngaphambi kokulala, uthandaza kuThixo ukuba uAhaml akadingeki ukuba aphendule ubomi. Ngokukhawuleza, kukho ingqongqo emnyango. Umama ka-Amahl uyamemeza u-Amahl ukuba aphendule kwaye u-Amahl uyavuya ngokulala. Uvula umnyango, kwaye ukumangaliswa kwakhe, ufumene ookumkani abathathu abaqaqambileyo. Umama ka-Amahl uphazamisa emnyango. Emva kokuba uhambe nje umgama omde ukuhambisa izipho kumntwana wezimanga ezimangalisayo, uMagi ucela imvume yokuhlala ekhayeni lakhe intsalela yobusuku.
Umama ka-Amahl uhambisa oothathu ookumkani emakhaya. Xa ehamba ukuze athabathe izinkuni, u-Amahl, uhlale ebuza, ubuza ookumkani ngokuphila kwabo kwimihla ngemihla kunye nemisebenzi yabo. Bavuya ngokunyanisekileyo, kwaye emva kokuba baphendule nganye imibuzo yakhe, babuza imibuzo yabo. Uyaphendula ukuba wayesebenzisa umalusi , kodwa emva kweengxaki ezininzi, unina wayethengise zonke izimvu zakhe.
Uyabatshela ukuba akuyi kubakho ixesha elide ngaphambi kokuba bacele ukuba bafumane ubomi obungaphantsi kobuhle. UKaspar, onobuntu obunjalo no-Amahl, uvula ibhokisi lakhe lobutyebi ukuze abonise u-Amahl amatye omlingo, ubucwebe obukhanyayo kunye namacandi awayelethe kuKristu umntwana. Uze unike ii-Amahl iinqununu zelayisensi. Umama ka-Amahl ubuyela ekufumaneni u-Amahl ubuza malunga nookumkani. Umemeza kuye ukuba angabi yinkathazo aze amthumele ngaphandle ukuba abuyisele abamelwane bawo nethemba lokuzonwabisa nookumkani.
Kamva ngalobo busuku, emva kokuba abamelwane bashiye kwaye imikhosi iphelile, ookumkani abathathu baya ekamelweni labo baze balale. Umama ka-Amahl ujikela phantsi kwiibhokisi zeengcango ezingenakulinganiswa ukuze athathe iincinci zegolide zeemali zakhe kunye nendodana yakhe. Ikhasi lookumkani livuka ukuze lifumane unina ka-Amahl ekhonkotha igolide kwaye ukhalela uncedo lokubamba isela. Eli phepha libuyela kumama ka-Amahl enethemba lokumyeka. U-Amahl uvuselelwa ngumsindo kwaye uphumele ngaphandle kwegumbi lakhe ukubona umama ehlaselwa yiphepha. Ngokukhawuleza u-Amahl uqala ukulwa nephepha. UKumkani Melchior uyakwazi ukuphucula imeko, kwaye ukuqonda u-Amahl kunye nonxunguko unina, ubavumela ukuba bagcine igolide.
Uthi uKristu umntwana akayi kuyidinga yonke loo golide yokwakha ubukumkani bakhe. Umama ka-Amahl unqabile xa eva ngolo kumkani kwaye unxusa amaMagi ukuba abuyisele igolide. Uze anikezele nokunika isipho sakhe, kodwa ngokudabukisayo, akanakho ukunika. Amahl, naye, unqwenela ukunika isipho kuKristu umntwana. Unika iMagi yakhe eyona nto ibaluleke kakhulu - i-crutch yayo. Ngokukhawuleza ukuba i-crutch ihanjiswe, umlenze we-Amahl uphulukiswe ngokumangalisayo. Ngemvume kamama wakhe, u-Amahl uhamba kunye noMagi ukubona uKrestu umntwana emntwini ukuba amnike i-crutch yakhe ngenxa yokuphulukisa umlenze wakhe.
Ukuba Imoto Yakho Ihluleka Ukuhlolwa Kokuphepha okanye Ukuvavanywa Kwemiphumo
I-Cleisthenes kunye neenkoliso ezili-10 zase-Athene
Platform Party Platform
Ngaba Ndifanele Ndifumane iSigqeba soLawulo lokuBamkela izihambi?